‘कागजपत्र’ मा कस्ता-कस्ता क्यारेक्टर ? (फोटो ग्यालरी) « Ramailo छ
‘कागजपत्र’ मा कस्ता-कस्ता क्यारेक्टर ? (फोटो ग्यालरी)
छायांकनरत फिल्म ‘कागजपत्र’ को केही क्यारेक्टर तस्विरहरु सार्वजनिक भएका छन् । फिल्मका मुख्य कलाकारहरु नाजिर हुसेन, शिल्पा मास्के, भोलाराज सापकोटा, सरिता गिरी, खिलेन्द्र तिमल्सिनाको तस्विर निर्माण पक्षले बाहिर ल्याएको हो । अपिल विष्ट निर्देशित फिल्मको हाल दाङस्थित तुलसीपुरमा छायांकन भइरहेको छ ।
वर्ल्ड वाइड फिल्म्स डिस्ट्रिव्युसन प्रा.लिको प्रस्तुती रहेको ‘कागजपत्र’ लाई खिलेन्द्र तिमल्सिना, मुकेश रेग्मी, प्रजापति सिवाकोटी, सुदिप उप्रेती र मनिष खत्रीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । कार्यकारी निर्माताको रुपमा विशारद बस्नेत रहेका छन् । सामजिक प्रेम कथा पस्कने फिल्मलाई अष्ट्रेलियन सिनेमेट्रोग्राफर क्यश्मिर डिक्सनले खिच्दैछन् । ‘कागजपत्रका’ क्यारेक्टर तस्विर हेर्नुस् :